Shirkadaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee FFP2
Faa'iidadeena ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Aqoon isweydaarsiga Wax Soo Saarka ： Baakadaha iyo Dhoofinta ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT oo loogu talagalay sambalka, Guri-ilaa-Door 2. ...
Faa'iidadeena ： 1. Welcom OEM & ODM. 2. Qiimaha Warshadaha, kala duwanaanshaha qiimaha dhexe. 3. Tayada si wanaagsan ayaa loo xakameyn karaa. 4. Alaab fara badan, qaabka, nooca, nashqadaha iwm 5. Wax alla wixii aad rabto, waxaan kuu raadin karnaa si sahlan wakhti kasta. 6. Yaqaanaan suuqa iyo badeecad kasta oo aan bixinno. 7. Koox xirfad iyo khibrad leh. 8. "Jawaab Degdeg ah" & adeeg fiican ka dib iibinta. Baakadaha & Dukaanka Ter Muddada Bixinta: Waxaad ku bixin kartaa amarka adiga oo adeegsanaya T / T, Cali Dammaanad Ganacsi, Wes ...
Tilmaamaha ： 1.3D naqshad ahaaneed oo bini aadamnimo ayaa ku habboon wajiga, sanka ayaa la hagaajin karaa si looga fogaado in hawadu soo baxdo 2.Naqno-la'aan, dib ayaa loo isticmaali karaa ilaa 7 jeer 3.Prevent dhibco / PM2.5 4.Electrostatic meltblown maro 5.Miltiple filter filter 6. Dhegaha raaxada leh 4.Marka si ahaan loo duubay, ka aamin san isticmaalka badan; 1PCS / OPP, 50PCS / BOX, 12BOX / CTN, 600PCS / CTN Codsi: 1. Codsi: adeegsiga dhismaha, macdanta, dharka, dawada shiidi. 2. Codsiyada: nolol maalmeedka, warshad warshad, SPAs, isbitaallo, rug caafimaad ...
Tilmaamaha workshop Aqoon isweydaarsiga wax soo saarka aging Baakadaha iyo Dhoofinta ： 1. FedEx / DHL / UPS / TNT oo loogu talagalay sambalka, Guri-ilaa-Door 2. Hawo ama Badda oo loogu talagalay alaabada dufcadda, ee FCL; 3. Macaamiisha qeexaya kuwa xamuulka qaada ama qaababka dhoofinta gorgortanka 4. Waqtiga Gaarsiinta: 3-7 maalmood oo muunad ah; 5-25 maalmood badeecada dufcadda. 5. Waqtiga gudbinta muunadda: 3-5 maalmood oo ay wada gaareen DHL / UPS / TNT / FEDEX express 6. Waqtiga Xaddiga Inta La Duubo: 5-7 Maalmaha shaqada ee Isniinta / 15-30 maalmood ee Xirmada Badda: Waxay kuxirantahay. Aqbalo si gaar ah ...